“ ပထမဆုံးဖောက်သည်” သည်ဂါထာဖြစ်ရမည် Martech Zone
ရရှိနိုင်သည့်ခေတ်မီဆန်းပြားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာများ၏စွမ်းအားကိုအသုံးချခြင်းသည်စီးပွားရေးအတွက်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်၏ဖောက်သည်ကိုစိတ်ထဲထားရှိမှသာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုသည်နည်းပညာအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသော်လည်းသင်ရောင်းနေသောလူများသည်မည်သည့်ကိရိယာသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ထက်မဆို ပို၍ အရေးကြီးသည်။
သင်၏ဖောက်သည်တစ် ဦး ဦး နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ရသောအခါတွင်သိကျွမ်းခြင်းကပြသနာများကိုဖြစ်စေသည်။ သို့သော်ကျွမ်းကျင်သောစျေးကွက်သမားများနှင့်ကစားရန်အလွန်များပြားသောအချက်အလက်ပမာဏသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောရုပ်ပုံလွှာကိုရနိုင်သည်။ မှန်ကန်သောမက်ထရစ်များကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောလူမှုမီဒီယာဆန်းစစ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်သည် ဖောက်သည်များကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း သင်၏ဖောက်သည်အခြေအနေကိုသင်၏အလုံးစုံနားလည်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပြောင်းလဲသွားပုံ
သုံးစွဲသူများသည်အထူးသဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမည်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်ကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်လာသည်။ တစ်ဖန်အပြန်အလှန်အားဖြင့်ယင်းတို့၏မျှော်လင့်ချက်များသည်ပိုမိုတောင်းဆိုမှုများဖြစ်လာသည်။ ဤ ၀ ယ်လိုအားကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကအပျက်သဘောမမြင်သင့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကြီးမားသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုကမ်းလှမ်းရန်နှင့်သူတို့၏ကုမ္ပဏီ၏အရည်အသွေးကိုဖော်ပြရန်နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည်ပုံမှန်ဖြစ်လာသည် အကြံပြုခြင်းတစ်ခုစစ်တမ်း ဖောက်သည် ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှမိနစ် ၃၀ အတွင်းတုန့်ပြန်မှုကိုမျှော်လင့်ပြီး ၁၀% သည်ရုံးရုံးချိန်များအတွင်းဖြစ်စေ၊ ညတွင်ဖြစ်စေ၊
အချက်အလက်စုဆောင်းရန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ရရှိနိုင်သည့်ရှုပ်ထွေးသော Martech ကိရိယာများသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုလူမှုရေးထိတွေ့မှုခြေရာခံခြင်း၊ CRM ဒေတာဘေ့စ်များ၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောစာရင်းအင်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသည်။ မတူညီသောအချက်အလက်အမျိုးအစားများသည်ပစ်မှတ်ထားသောဖောက်သည်များကိုတိကျမှန်ကန်စွာရှာဖွေနိုင်ခြင်းနှင့်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုပုံဖော်ရာတွင်တိကျမှန်ကန်စေသည်။
၎င်းသည်စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်များစွာဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသည်အရာရာကိုပုံမှန်ဖြစ်စေရန်ရုန်းကန်နေရသည်ကိုနားလည်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မှန်ကန်သောနည်းပညာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်အမှန်တကယ်အရေးကြီးပြီးလူမှုရေးထောက်လှမ်းရေးကိရိယာများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများကိုအသုံးချခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။ သင်၏ဖောက်သည်များ၏အကျိုးအတွက်သင့်အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အောက်ပါအချက်များသည်အဓိကစဉ်းစားသင့်သည်။
ပြိုင်ဘက်များ၏ခြေရာခံခြင်းနှင့်စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းသည်သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းသင်၏ရာထူးကိုရှာဖွေရန်နှင့်လိုအပ်ပါကတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုမှသင်ပြုလုပ်သည့်အတိုင်းအတာများအတိုင်းအတာကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ အချည်းနှီးသောမက်ထရစ်များကိုသင်စုဆောင်းနိုင်သည့် ပို၍ မြင်သာသောဒေတာများနှင့်ဟန်ချက်ညီအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်နှင့် ပါတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များစွာရရှိနိုင်သည့်အပြင်အကြောင်းအရာကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ထူးခြားသောဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံများကိုမထုတ်ယူရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ ဒီအဝတ်အစားနှင့်အိမ်သုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏နောက်ဥပမာတွင်မည်ကဲ့သို့ကြည့်ရှုနိုင်သည် ဖောက်သည်များ၏အကျိုးစီးပွားကိုနားလည်ခြင်းသည်နောင်လာမည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုစီစဉ်ရန်ကူညီနိုင်သည်.
ဒီဒေတာအတော်လေးကျပန်းပုံပေါ်လိမ့်မည်ပေမယ့်ဒါပေမယ့်ဘာမှဖြစ်ပါတယ်။ Sotrender ၏အချက်အလက်များကိုအနီးကပ်ကြည့်လိုက်ရင်အနာဂတ်မှာသူတို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုဘယ်နေရာမှာယူမယ်၊ ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ဆွဲဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုနောက်ပြလိမ့်မယ်။ ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိခြင်းသည်အနာဂတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုစီစဉ်ရန်နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဆင့်များ၌အကောင်းဆုံးနေရာတွင်ရှိရန်သေချာစေရန်ကူညီရန်အရေးကြီးသည်။
သင့်ဖောက်သည်တွေကဘာကိုလိုချင်တာလဲ။ သင်ဖွံ့ဖြိုးလိုသောအရာကိုသင်သိကောင်းသိပေမည်၊ သို့သော်လူများသည်လိုချင်သလား။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှတစ်ဆင့်မတောင့်တသောတုံ့ပြန်ချက်များကိုပင်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အပြုသဘောဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်သင်၏ဖောက်သည်များကိုပါထပ်မံသွားရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကိုကာကိုလာကသူတို့နှင့်အတူဤအမှုကိုပြု၏ VitaminWater တံဆိပ် သူတို့အဖြစ် သူတို့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အခြေစိုက်စခန်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် သစ်တစ်ခုအရသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကူညီရန်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်။ အနိုင်ရသူအားအရသာအသစ်ကိုတီထွင်ရန်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ပေးခဲ့ပြီး၊ VitaminWater Facebook မှပရိသတ် ၂ သန်းကျော်သည်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါ ၀ င်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။
ကဏ္ every တိုင်း၌ယခုအခါအွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း၌လေးစားမှုနှင့်ဂရုစိုက်မှုကိုခံယူသောအဓိကသြဇာသက်ရောက်သူများရှိသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်ဤသြဇာလွှမ်းမိုးသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးပြီးဘဏ္investmentာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပင်ကုန်ဆုံးစေပြီးသူတို့၏ထုတ်ကုန်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ထောက်ခံရန်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ဖြစ်သည်။
မက်ခရိုနှင့်မိုက်ခရိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများသည် ၀ ယ်လိုအားအလွန်မြင့်မားနေသဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ထောက်ခံအားပေးသူများနှင့်သင်၏ ဦး တည်ချက်ဖောက်သည်နှင့်အနီးကပ်လိုက်ဖက်သူများကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ “ ဖောက်သည်ပထမ ဦး ဆုံး” ဂါထာဖြင့်သင်၏ပရိသတ်ကိုတစ်ခုခုရည်ညွှန်းပြီးသင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများတွင်နာမည်ကောင်းနှင့်သင့်လျော်သောနောက်လိုက်အရေအတွက်ရှိသည့်“ မည်သူမဆို” မျှမဟုတ်ဘဲလွှမ်းမိုးသူများကိုရှာဖွေသင့်သည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အတွက်မှန်ကန်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသည်သိမ်မွေ့သောအနုပညာတွင်အောင်မြင်ရန်အမှန်တကယ်အရေးကြီးသည် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး.
သင်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုဖောက်သည်များကထောက်ခံအားပေးသည့်အတွက်ဂုဏ်ယူသည့်အရာအဖြစ်သတ်မှတ်လိုသော်လည်းထောက်ခံမှုရရှိရန်အတွက်သင်သည်ဖောက်သည်များအားအပြည့်အ ၀ အာရုံစိုက်ရမည်။ ဒါဟာနည်းပညာအတွက်ထုပ်ရနှင့်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှု၏လူ့ရှုထောင့်ကိုမေ့လျော့ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အကောင်းဆုံးသောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံများကိုပံ့ပိုးပေးရာ၌နည်းပညာသည်ကူညီရန်နှင့်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။
Tags: benchmarkingပြိုင်ဘက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖောက်သည်ပထမ ဦး ဆုံးFacebook ကပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုပရိုဖိုင်း
၃ နှစ်အတွင်းအရောင်းအ ၀ ယ်စကားဝိုင်းများပြောင်းလဲခြင်း